Tag: kalendly | Martech Zone
Alatsinainy, Jolay 13, 2020 Alakamisy 4 martsa 2021 Douglas Karr
Ireo tranonkala izay manampy sora-baventy porofo ara-tsosialy mivantana dia manatsara ny taham-panovana sy ny fahatokisan'izy ireo. Pulse dia ahafahan'ny orinasa mampiseho fampandrenesana momba ny tena olona mandray andraikitra amin'ny tranokalany. Tranonkala mihoatra ny 20,000 10 no mampiasa Pulse ary mahazo fihenam-bidy XNUMX% eo ho eo. Ny toerana sy ny faharetan'ny fampandrenesana dia azo namboarina tanteraka ary, na dia misarika ny sain'ny mpitsidika aza izy ireo, dia tsy mampiala ny sain'ny lavitra amin'ny tanjona misy ilay mpitsidika. Mahafinaritra
Calendly: ny fandaharam-potoana fivorianao amin'ny Internet
Alarobia 8 Janoary 2014 Douglas Karr
Rehefa nitelina an'i Tungle i Blackberry ary namarana azy dia tena diso fanantenana aho. Mora ho an'ny olona ny nanomana fivoriana miaraka amiko miaraka amin'ny sehatra misy azy ireo. Nomeko lalana ny TimeTrade fa mampisavoritaka loatra… ho ahy sy ho an'ny olon-tiako te handamina fivoriana miaraka aminy. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nandefa URL ho ahy i Jeb Banner an'ny SmallBox handamina fivoriana miaraka aminy ary avy hatrany dia nifankatia aho… antsoina hoe Calendly ilay sehatra
Momba ny fivoriana manaraka
Alarobia, Febroary 17, 2010 Alahady, Jona 28, 2015 Douglas Karr
Nieritreritra be momba ny fivoriana aho tato ho ato. Ny lahatsoratr'i Seth momba ny hetsika isan-taona nataon'ny orinasa dia nanentana ahy hanomboka hamolavola ity lahatsoratra ity. Amin'ny maha olona manana orinasa iray an'ny mpiasa iray dia mila mitandrina mafy aho amin'ny isan'ny fivoriana atrehako izay miteraka fidiram-bola. Isan'andro dia asaina any amin'ny fivoriana aho - matetika kaopy kafe na sakafo atoandro. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, izy ireo dia fifandraisana matihanina na mitarika mihitsy aza